सामान्य मानिसका गल्तीलाई गल्ती मानिन्छ, विज्ञानले गर्ने गल्तीलाई परिक्षण र 'भगवान'का गल्तीलाई लिला !
२०७१ भदौ ४ गते, वुधवार १८:११:४० बजेसामान्य मानिसका गल्तीलाई गल्ती मानिन्छ, विज्ञानले गर्ने गल्तीलाई परिक्षण र 'भगवान'का गल्तीलाई लिला ! कहिलेकाहीँ बहिखाताको हिसाबमा गल्ती हुन्छ । सायद, श्रीकृष्ण श्रेष्ठका विषयमा लगाइएको यो हिसाब गल्ती थियो । मृत्यु निश्चित छ भए पनि समय निश्चित छैन । यसैले मृत्युहरु असामयीक मानिन्छन् । विवाह गरेको एक महिनामा ४६ वषिर्य हिरोको यो मृत्यु कुनै पनि अर्थमा सामयीक थिएन ।
‘रोग मदनदाइलाई लाग्यो, थला परेँ म’
२०७१ असार ३२ गते, वुधवार १७:२६:५० बजेगुणराज लुइँटेल
चर्चित कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (मह)ले मञ्चन गरेको एउटा कार्यक्रमको नाम थियो– रिमोट कन्ट्रोल। त्यो बेला मदनकृष्णको हातमा रिमोट थियो। उनले चलाएपछि हरिवंश चल्थे। हरिवंशलाई त्यो बेलामा ‘यस्तो पनि हुन्छ र?’ भन्ने लागेको थियो। अहिले धेरै वर्षपछि मदनकृष्णको हातमा त्यही रिमोट आइपुगेको छ। हालै पार्किन्सनको शल्यक्रिया गरेपछि उनको शरीरमा जडित पेसमेकरको गति त्यही रिमोटले नियन्त्रण गर्छ।
२०७१ वैशाख १२ गते, शुक्रवार ११:००:०६ बजेहरिबंश आचार्य
आजकै दिन म सधै मीराको जन्मदिन मनाउँथे । उनी रातो लुगामा सजिन्थिन् । मन खुसि हुन्थ्यो । र, आजै उनको दुई वर्षको पुण्यतिथिमा घरमा श्राद्ध थियो । जताततै पहेँलो । छोरो मोहित पहेँलो टिकामा भित्र–बाहिर गर्दा मीरालाई सम्झिएर मेरो मन भक्कानियो । मैले आफूलाई थाम्नै सकिनँ । भित्र कोठामा पसेँ । मनलागे जति रोएँ ।
प्रहरी निरीक्षकको अनुभव : यसरी भेटियो दुर्घटनाग्रस्त विमान
२०७० फागुन ८ गते, विहिवार ०७:२२:४० बजेपोखराबाट जुम्लाका लागि आइतबार १२:४० बजे उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको ट्वीनअटर जहाज सम्पर्कविहीन भएपछि अर्घाखाँची जिल्लाको कुनै भूगोलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हुनसक्ने खबर लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मिङमार लामाज्यूले मलाई दिउँसो २ बजे जानकारी गराउनुभयो । त्यसबखत म कार्यालयको काममा ब्यस्त थिएँ ।
जुटबहादुर खड्गी सुखको सधैँ प्यासी बनेर
२०७० पुस २७ गते, शनिवार १५:५१:४४ बजे
पञ्चायतकालमा यो गीत गाउँदै हिँड्दा जेबी टुहरे कतिपटक पुलिसको लखेटाइमा परे भनेर साध्यै छैन । परिवर्तनका लागि ज्यान बाजी थापेका टुहुरे सांस्कृतिक मोर्चाको अग्रपंक्तिमा थिए। पञ्चायत पुलिसले नलखेट्ने कुरै भएन । यही गीत सुनेर महिलाहरु डाँको छोडेर रुन्थे– टुहुरेले देख्थे मञ्चबाट– गीत सुनेर कति दिदीबैनीहरुका आँखामा आक्रोसको आगो। चेतनाको बिजुली चम्केका अनुहार । अनि आउँथ्यो पुलिसको तारो बने पनि गाउँगाउँ गीत गाउँदै हिँड्ने जोस।
किसुनजीबाट सिकेर वर्ष दिनमै संविधान लेख्नुहोला
२०७० पुस ९ गते, मंगलवार ०६:५२:५२ बजे
सबैभन्दा पहिला म आज जसको ९० औं जन्मोत्सव मनाइरहेका छौं, यस अवसरमा तिनै सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यसपछि यति भव्य र शान्त कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने उहाँकी सहयोगी सुश्री अमिताज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु।
संविधानसभाकै अगाडि सुरक्षित छैनन् किशोरीहरु
२०७० पुस ८ गते, सोमवार १९:१४:२० बजेसोमबार बिहान अनलाइनखबरको कार्यालय आउने क्रममा बिहान ९:४५ बजे पुरानो बानेश्वरबाट शंखमूलतर्फ आउने तीन पाङ्रे टेम्पोमा चढेँ । मेरो छेउमा कलेज ड्रेसमा एउटी किशोरी बसेकी थिइन् । टेम्पोमा ५/६ जना यात्रुहरु थिए । मध्यबानेश्वर आइपुगेपछि हातमा मोबाइल बोकेको एउटा युवक चढ्यो र मेरो छेवैमा बस्यो । किशोरी र मेरो वीचमा बसेको उसले कालो ऊनीको टोपी लगाएको थियो
छाता र लठ्ठी बोकेर हिँड्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दा धेरैले अचम्म माने ! किशुनजी आश्रममा राष्ट्रकविको सम्बोधन
२०७० पुस ८ गते, सोमवार १९:१०:०४ बजेसन्त नेता कृष्णप्रसादप्रति हार्दिक श्रद्दा अर्पण गर्दछु । उहाँकी सहयोगी अनिता कपालीज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्न चहान्छु । यो पवित्र आश्रममा म पहिले पनि आउन खोजेको थिएँ । तर, नभ्याएकाले आउन पाएको थिइँन । यहाँको वातावरण र यहाँको शान्ति देख्दा मेरो हृदय प्रफुल्ल भयो ।
बगरमै वाषिर्क ८ लाख टन तरकारी उत्पादन
२०७० पुस ४ गते, विहिवार ०७:५८:२५ बजेबर्सेनि नदीनालाले कटान गरेर बगरमा परिणत गरेको खेतीयोग्य भूमि उपयोगबाट वाषिर्क ८ लाख मेटि्रक थन तरकारी उत्पादन गर्न सकिने भएको छ । बगरखेतीलाई उपयोग गर्न सकेमात्र हालको उत्पादनमा २४ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । यस्तो बगरलाई उपयोग गर्न पहिलोपटक ‘स्थानीय बगरखेती प्रवर्द्धन नीति २०७०’ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ ।
यस्तो थियो पारश शाह र रुबेल चौधरीको विवाद कोइराला परिवार र शाह खान्दानको मुद्दा
२०७० पुस ४ गते, विहिवार ०७:५६:१० बजेतीन वर्षअघि नेपालका दुई ‘भीभीआइपी’ परिवारका सदस्यबीच भएको झगडा स्वदेशी मात्रै होइन, विदेशी सञ्चार माध्यमका लागि पनि गतिलो खुराक बनेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका एक्ला छोरा पारस र पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नातिनी ज्वाइँ बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरीबीचको झगडाले चर्चा पाउनु स्वभाविक नै थियो । नेपालका यति उच्च घरानाका सदस्यबीचको सोझो टक्कर सम्भवतः पहिलो थियो, जुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एक होटेलदेखि प्रहरी हुँदै इजलाससम्म पुग्यो ।
जापानमा चारदसक र एनआरएन एकदसक फर्केर हेर्दा
२०७० पुस ३ गते, वुधवार १९:५१:१० बजेदेवमान हिराचन
जापानका कवि इकाई कावागुचीले २०४६ मा नेपाल बसाइँका क्रममा मुस्ताङको मार्फालाई इंगितगर्दै कोरेका हरफहरु हुन् यी। उनले गरेका वर्णनहरूको क्षेत्र मुस्ताङको मार्फा गाउँवाट मेरो जीवन–यात्राको थालनी भएको हो।
'फिसिङ फर रिफ्रेसिङ'
२०७० मंसिर २४ गते, सोमवार १०:२९:३४ बजे
२०३९ सालमा नै जाल खेल्न सिकेकाका विष्ट जाल खेल्दा सबै तनावलाई भुल्छन्। म्याग्दी जिल्लाबाट संविधानसभाको चुनाव लडेका एमाओवादीका नेता लोकेन्द्र विष्ट मगरले चुनाव प्रचारकै क्रममा पनि समय निकालेर माछा मार्न भ्याए।
जाल लिएर कम्मरमा फुर्लुङ कसेपछि उनको अनुहार यति चकिलो हुन्छ कि मानौं उनी संसार जित्दैछन्। कालिगण्डकीमा जाल फाल्दै उनले भने 'फिसीङ फर रिफ्रेसिङ।'